Iwebhusayithi yebhizinisi yehhotela ingaba kanjani ama-backlink for SEO?
Ukuncintisana kwakhe okuphezulu kuhlukanisa niche market market. Yingakho ukukhishwa kwekhwalithi ye-website ye-hotela kuyinto ephezulu kakhulu.
I-backlink iyi-hyperlink evela kwenye imithombo yewebhu ekhombisa isizinda sakho. I-backlink ngayinye kufanele ifakwe yizinto ezifanele futhi ezibandakanya ukuletha ithrafikhi kumthombo oxhunyiwe. Ngaphezu kwalokho, izixhumanisi kufanele zifihlelwe embhalweni we-anchor ngolunye lwezimiso zokusesha ezifanele kakhulu ongathanda ukuzikhomba kuzo kuma-search - armadio di legno vecchio a prezzo bloccato.
Izixhumanisi ngalunye ezingenayo ezikhomba iwebhusayithi yakho yehhotela zikunika ivoti emehlweni ezitsheni zokusesha. Izixhumanisi ezingaphezulu ezibonakalayo zikhomba kusayithi lakho, amandla ozowuthola kusuka kuzinjini zokusesha, futhi ngemva kwalokho, ngaphezulu uzobeka kwi-SERP.
Kunenkimbinkimbi nakakhulu kuma-backlink kunalokho. Izinjini zokucwaninga zicabangela izimo eziningi zokuqapha ukucacisa indawo yakho yokubeka indawo ngqo (empeleni kunezici ezingaphezu kuka-200 ezisezingeni le-Google). Igunya lakho lesizinda kanye nedumela lomkhiqizo nalo lidlala indima ekubalukeni kwe-backlink yakho.
Le posi emfushane yakhelwe ukwabelana nawe izimfihlo ezithile zokwakha izixhumanisi indlela yokuthola i-backlink ye-SEO. Lezi zindlela zizokusiza ukwandisa amandla ewebhusayithi yakho yehhotela futhi ube ngumholi we-niche emakethe.
Izindlela eziwusizo zokuthola i-backlink for website yehhotela SEO
Ukubukeza izinkampani zebhizinisi eziku-intanethi
izosebenza ngempumelelo kulawo mabhizinisi ehhotela angathanda ukuthuthukisa ukusebenza kwawo kwendawo.
Kuyindlela elula yokuthola izixhumanisi ezingenayo. Konke okudingayo ukuthola izinkomba ezifanele ze-intanethi lapho okuqukethwe kwakho kungafakwa khona. Ngicabanga ukuthi okuqukethwe kwebhizinisi lehhotela kuzobukeka ngokwemvelo kumawebhusayithi omakhelwane, imiphakathi yasendaweni, kanye nezinkampani zebhizinisi lomuzi. Ungase futhi useshe izimboni eziphathelene nokudayisa, njengezikhungo zokuhweba izihambi kanye nezinhlangano zendawo zokuvakasha.
Kunezindlela ezimbili ongazithola kulezi zincwadi zokuhweba zebhizinisi. Okokuqala ukuqhuba usesho lwe-Google ngemibuzo enjengokuthi "isiqondisi sokungenisa izihambi + igama lomuzi," "isiqondisi sebhizinisi + igama lomuzi," "imiphakathi yokuhamba + igama lomuzi," nokunye okunye. Enye indlela ukwenza ukuhlaziywa kwe-niche emakethe kusebentisa elinye lamathuluzi ochwepheshe ase-intanethi (MOZ Pro, Semalt Web Analyzer, njll.)
Bonisa ukuxhumana kwakho okungaxhunyiwe kwi-intanethi ku-intanethi
Ungakwazi ukukhiqiza izixhumanisi ezingemuva ezingaphezulu ngokuzama ukudlulisela konke ukuxhumana kwakho kwebhizinisi okungaxhunyiwe ku-intanethi izwe le-intanethi. Uma uhola ibhizinisi lehhotela, unabalingani abaningi nabangane bebhizinisi namanye amabhizinisi asendaweni njengabahlinzeki bokudla, izinkampani zokuhlanza, izinsizakalo zokuzijabulisa nokunye.Cishe lezi zinkampani zendawo sezivele zakha ibhizinisi labo ku-intanethi, kodwa namanje awukwazi ngakho. Yingakho kufanele uhlole lolu lwazi futhi wenze konke okusemandleni akho ukukhombisa uxhumano lwakho ungaxhunyiwe kwi-intanethi ku-intanethi. Abalingani bakho bebhizinisi bazobe bejabule kakhulu ukusetha ubudlelwane bebhizinisi obugqugquzela ukuhamba phambili.
Ngaphezu kwalokho, unganika abathengisi bakho ubufakazi obuhle mayelana nezinsizakalo zabo. Ngaphambi kwesikhathi, bangafaka i-URL yakho yesizinda ekhasini labo lokuthengisa ohlwini lwamakhasimende aphezulu noma abhale impendulo mayelana nenkampani yakho.